ပြစ်မှုဆိုင်ရာဆေးခြောက် DUI ရှေ့နေအီလီနွိုက် | Peoria အီလီနွိုက်ပြည်နယ်များတွင်ဆေးခြောက်ရှေ့နေချုပ်
အီလီနွိုက်ပြည်နယ်၌ပြစ်မှုဆိုင်ရာဆေးခြောက် DUI ရှေ့နေ
အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ရှိ Cannabis DUI နှင့်ဖမ်းမိခြင်း၊ အီလီနွိုက်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ DUI ရှေ့နေသည်ဆေးခြောက်ခြင်းအတွက်အဖမ်းခံရသောလူများရင်ဆိုင်နေရသောရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုသင်ကူညီပေးနိုင်သည်။
ရာဇဝတ်ကောင် ဆေးခြောက် DUI တရားဥပဒေရှေ့နေ အီလီနွိုက်ပြည်နယ်
ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းကိုတရားဝင်ဖြစ်သောဥပဒေများစွာပြwhich္ဌာန်းပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ဤအရာသည်သင်ဤကုန်ပစ္စည်းကိုသုံးနိုင်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဥပမာအီလီနွိုက်ပြည်နယ်တွင်ဆေးခြောက်ဆေးခြောက်အသုံးပြုမှုကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်တရားဝင်နှင့် ၂၀၂၀ တွင်လူကြီးများအသုံးပြုခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကတည်းကစတိုးဆိုင်အမြောက်အများသည်ဆေးခြောက်ဆေးဝါးများကိုအရည်အချင်းပြည့်မှီသောဆေးခြောက်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများထံရောင်းချခဲ့သည်။
သို့သော်အချို့သောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းသည်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်တွင်တရားမ ၀ င်သေးပါ။ - တရားဝင်ပြီးနောက်!
အကယ်၍ သင်သည်ဥပဒေ၏မှားယွင်းသောအယူအဆကိုတွေ့ရှိပါကသင်၏ဆေးခြောက် DUI အတွက်ထောင်ဒဏ်မကျရောက်စေရန်အကောင်းဆုံးကာကွယ်မှုကိုချမှတ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သင်တစ် ဦး နေထိုင်သူမှန်လျှင် Illinois, သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်ရာဇဝတ်မှုဆေးခြောက်တရားမှကြွလာသောအခါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆေးခြောက်ထုတ်ကုန်များအသုံးပြုခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်များကိုဖြေရှင်းရာတွင်ဖောက်သည်အမျိုးမျိုးအားကူညီသည်။ သငျသညျဆေးခြောက်ကိုစစ်မှန်သောရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက်အသုံးပြုနေစဉ်၊ သင်၏မျက်လုံးများကသင်၏လုပ်ရပ်များကိုမှားယွင်းစွာအနက်ဖွင့်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏အမှုအားသင်ငြင်းခုံပုံသည်တရားရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင်အဓိကကျသောအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။
သင်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်တွင်နေထိုင်သူဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုသင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ DUI ဆေးခြောက် litigation. ဆေးခြောက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစ္စရပ်များကိုဖြေရှင်းရာတွင်ဖောက်သည်အမြောက်အများကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီခဲ့သည်။
အငြင်းပွားဖွယ်ရာပစ္စည်းတစ်ခုကို အသုံးပြု၍ တရားစွဲဆိုခြင်းသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။ ကြားနာခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းသင်၏အခွင့်အရေးနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်များကိုသင်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသော်လည်းသင့်တော်သောကိုယ်စားပြုမှုမပါရှိပါကအချို့သောအခွင့်အရေးများနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်များကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။ မင်းကရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာရှေ့နေတစ်ယောက်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါ၊ ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်ရဖို့သင့်အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးလာတယ်။
အကယ်၍ သင်သည်ဆေးခြောက်အတွက်ဆေးခြောက်သုံးစွဲနေလျှင်သင်၏လုပ်ရပ်များကိုသက်သေပြရန်ရှေ့နေတစ် ဦး လိုအပ်လိမ့်မည်။ ရှေ့နေမပါဘဲတရားရုံး၌အမှုဖွင့်ခြင်းသည်သင်၏အမှုကိုရှုပ်ထွေးစေနိုင်ပြီးသင်အားမှားယွင်းစွာစွဲချက်တင်ခံရနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်တစ် ဦး ရရန်အကြံပြုပါသည် အတွေ့အကြုံရှိပြစ်မှုဆိုင်ရာရှေ့နေ သင်၏အမှုအားငြင်းခုံရန်၊ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောဥပဒေများကိုမည်သူနားလည်သနည်း။
မင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှည်လျားတဲ့တရားရုံးတိုက်ပွဲတွေကိုမသွားချင်ဘူးဆိုရင် ဆေးခြောက်ရာဇဝတ်မှုစွဲချက်, ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသောရှေ့နေများကကိစ္စရပ်များကိုတရားရုံးပြင်ပ၌ကူညီဖြေရှင်းပေးမည် အသနားခံစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုမှတဆင့်, များစွာသောတရားခံထောင်အများကြီးနှင့်အတူရှုပ်ထွေးသောကိစ္စရပ်များမှဖြေရှင်းချက်ကိုရှာဖွေနိုင်ကြသည်။ သင်သို့မဟုတ်သင်၏စီးပွားရေးကိုဒေါ်လာထောင်နှင့်ချီ။ ကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည်မှာကြာရှည်ပြီးညစ်ပတ်နေသောတရားရုံးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမသိသောဝါကျဖြစ်စေနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေချုပ်သောမတ်စ်ဟော့ဒ်သည်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဆေးခြောက်အမှုများတွင်အတွေ့အကြုံများစွာရှိသောယုံကြည်ရသောဥပဒေရေးရာထောက်ခံသူဖြစ်သည်။ သူသည်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ရာနှင့်ချီသောဖောက်သည်များကိုတရားမျှတသောကြားနာမှုနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာဆေးခြောက်စွဲမှုများကိုလျှော့ချရန်ကူညီခဲ့သည်။ သင် Peoria အီလီနွိုက်ပြည်နယ်တွင်နေထိုင်သူဖြစ်ပြီးသင်ကဆေးခြောက်သုံးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစ္စတစ်ခုကိုဖြေရှင်းလိုလျှင်၊ မစိုးရိမ်ပါနှင့်။